K Z Thant - Google+Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »Send Feedback | Web History | Help | Sign inProfileHomeProfilePeopleCollectionsWhat's hotCommunitiesEventsHangoutsPagesSettingsFeedbackHelp · RegionPrivacy · Terms · Maps TermsStartahangout K Z Thant245 followers|124,832 viewsProfileK Z ThantLives in Singapore.245 followers|124,832 viewsAboutPostsPhotosVideosStreamK Z ThantShared publicly - 2013-11-23 Harry Potter Fans originally shared: Hahaha, this is amazing! #HarryPotter Harry Potter In Real Life - Train Station Surprise! (Episode 8)﻿Read moreShow lessHarry Potter In Real Life - Train Station Surprise! (Episode 8)11 commentTheinThein Soe+010 Reply ဟေး﻿Read moreShow less · TranslateAddacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-06-07 ကြည့်ပါဦး၊ ဟောဒါ ကျနော်ချစ်တဲ့ ရန်ကုန်ပေါ့၊ ရန်ကုန်ဟာ ကျနော့်ရဲ့ အောက်ဖက် ခပ်နိမ့်နိမ့်မှာ ရှိနေပေမယ့် အပေါ်စီးကနေ ကျနော် မကြည့်ရက်ပါဘူး၊ သူ့မှာက သူ့ဟာနဲ့သူတောင် ဒုက္ခတွေ ပင်လယ်ဝေနေ ခဲ့ရတာပါ..၊Bravo!!!!﻿Read moreShow less · Translateအာရုံများ ပျံသန်းရာ နိုင်ငံကလေးသို့ (၈)nyilinnthit.blogspot.com1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-04-23 ဒေါ်စု ကိုယ့်စကားနဲ့ ကိုယ်ပြန်ဂျောင်ပိတ်မိနေပြီmgkyautkhae.com1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-04-13 သင့်ကြောင့် ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်...mabaydar.blogspot.com1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-03-28 စိတ်တွေကို အရင်ပြင်ဖို့လိုလိမ့်မည်fine-leaves.blogspot.comဘန် ကောက်မြို့ လူစည်ကားသည့် တနေရာ၌ ဖြစ်သည်။ အသက် ၆ဝ ဝန်းကျင်ခန့် အမျိုးသမီးကြီးသုံးဦးနှင့် အသက် ၂၅ နှစ်ခန့် အမျိုးသမီးငယ် တဦး ဈေးဝယ်နေကြသည်။ သူတို့လေးဦးစလုံး မြန်မာလူမျိုးတွေ ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဖွားကြီး သုံးယောက်နှင့် မိန်းမပျိုတို့ တဦးနှင့်တဦး မြန်မာလို စကားကို အကျယ်ကြီးပြောနေတာကို ကြားရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို အချိန် သူတို့နားသို့ အပြာနုရောင် ရှပ် လက်ရှည်နှင့် ကာကီရောင် ရှိုးဘောင်းဘီကို သားသားနားနား ဝတ်စားထားသည့် အသက်လေးဆယ် အရွယ် ...1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-03-26 မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာnaypyidaw2.co.cc(ဂါမဏိ ဘာသာပြန်သည်) အာဏာရှင်တို့၏ စီးပွားရေးတလွဲတချော်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် နိုင်ငံအချို့၏ ချော့မြှူရေးပေါ်လစီကို လျစ်လျူရှုကာ၊ အာဟာရ ချို့တဲ့နေသည့် ကလေး သူငယ်များ၊ သန်းနှင့်ချီသည့် တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ နှင့် ဒုက္ခသည်များကို လက်ညှိုးထိုးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုကို အပြစ်ဆိုချင်သူများ ရှိနေပါသည်။ သို့ရာတွင် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ပြောရာတွင် ပညာရှင်အမြင်၊ စစ်အစိုးရဘက်...1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2013-09-10 PR မပေးဘဲ White Card ပဲပေးနေမှဖြင့်...﻿Read moreShow less · Translateဘုရားရှင်အတွက် အော်နာရယ်ရီ စီတီဇင်ရှိပ်cammlek.blogspot.comအခုတလော ဘုရားရှင်ကို ကပိလဝတ္ထုပြန်ပို့ ဆိုသောစကား လူပြော များနေသည်။ ဗီဇာသက်တန်း တိုးမရလေသောကြောင့်လား မပြောတတ်။ ဘုရားရှင်ကို တော့ ကပိလဝတ္ထုကို ပို့လို့ ရအံ့မထင်၊ ကြွလိမ့်မည်လည်း မဟုတ်။ ပို့မယ်ပို့ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားကိုတော့ ပို့လို့ ...1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-11-16 ဂန်းနန်း စတိုင် ကောင်ကလေးနှင့် တောင်ရောက် မြောက်ရောက်cammlek.blogspot.comဤဆောင်းပါးက လာအို ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အမှတ်တရ လေးများကို ပြန်ရေးခြင်း ဖြစ်သည်။
၁ ။ စလုံးပိုင် ဟော်တယ်များ
လာအိုနိုင်ငံ ဟု ဆိုသော်လည်း တည်းခိုခဲ့ရသော ဟော်တယ်များက စလုံးပိုင်များ ဖြစ်ကြသည်။ စလုံး တို့ စီးပွားရေး လက်တန် ရှည်သည်။ လာအိုနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ အရ နိုင်ငံခြားသားများ အနေနှင့် ဒေသခံ ရှယ်ယာ မပါဘဲ စီးပွားရေး လုပ်ခွင့်မရှိ၍ ဖက်စပ်ဖြစ်နေ ရသော်လည်း ခန့်ခွဲမှုက စလုံး တို့ လက်အောက်မှာ လုံးလုံးလျားလျား ရှိနေသည်။ ထူးခြားသည့် အချက် က စလုံးပိုင်ဖြစ်သည့်အ...1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-04-24 ဒီချုပ်အမတ်များ လွှတ်တော်ဝင်ရေးirrawaddyblog.com1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-04-17 ပုံရိပ်ယောင် အစစ်feedproxy.google.com၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလလောက်မှာ ကလေးတွေ မွေးကြအုံးမယ် - လို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေရှယ်သည့် သင်္ကြန်ပုံများကို ကြည့်ရင်း မမခင် က ဆိုသည်..
အို မမခင် ကလဲ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ..နောက်ပြီး တစ်ခုခုပြော၇င် အားလုံးကို ခြုံငုံပြီး မပြောပါနဲ့.. တစ်ချို့တစ်လေတွေသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
အမလေး..ငါက မှန်တာပြောတာ.. မယုံရင် စောင့်ကြည့်နေ.. နောက် ၆လ တစ်နှစ်လောက် နေရင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးရှိမရှိ စစ်တဲ့သူတွေလဲ အရင်ကထက် များလာအုံးမယ်..နောက်တော့ အဖြေရှာတော့ သင်္ကြန်ကြောင့်ဆိုပြီ...1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-04-03 အမေရဲ့ နောက်ဆုံးသွားတစ်ချောင်း99sanay.comမိစံ ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက် မွေးကင်းစကလေးငယ်ကို ကူထိန်းဖို့ ရွာက အသက်(၆၅)နှစ်ကျော်အရွယ် မိခင်အိုကို အိမ်ခေါ်ထားခဲ့တယ်။ တစ်နေ့မှာ ကလေးငယ်ကိုအစာကျွေးရင်းက ကလေးပါးစပ်အဟမှာ နီနီစွေးစွေးသွားဖုံးထဲကနေ အဖြူရောင် သွားပေါက်လေးတစ်ချောင်းကို မိစံတွေ့လိုက်မိတယ်။ သားရဲ့ သွားပေါက်လေးကိုတွေ့တော့ မိစံ စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားပြီး မိခင်အိုကို အော်ခေါ်လိုက်တယ်။ "အမေ... အမေ .. သား သွားပေါက်ပြီး အမေ.." မိစံဘယ်လိုခေါ်ခေါ် အမေပြန်ထူးသံမကြားခဲ့ဘူး။ အမေရှိရာကို သူလှည့်ကြည့်တော့ အမေဟ...1Addacomment...K Z ThantShared publicly - 2012-03-28 အိုင်ဖုန်း အိုင်ပက်တွေကို မီးရှို့ပူဇော်မယ့် ရိုးရာနေ့irrawaddyblog.com11 commentjoe king+010 Reply မင်းတိုလဲiphone /ipod/ipadကိုင်ချင်၇င်တော့...နောက်ဘ၀သ၇ဲဖြစ်မဘဲကိုင်တော့﻿Read moreShow less · TranslateAddacomment...MoreLoading...PlacesCurrentlySingapore.PreviouslyMyanmar - Aphyauk - Myanaung - YangonLinksYouTubeK Z ThantBasic InformationGenderMaleWe were unable to fetch any YouTube videos at this time. Please try again.Videos are visible only to people they've been shared with.We were unable to fetch any videos at this time. Please try again.